20-Sano kadib Maxaa iska badalay goobaha Cafimaadka Puntland? (dhegayso) – Radio Daljir
20-Sano kadib Maxaa iska badalay goobaha Cafimaadka Puntland? (dhegayso)
Seteembar 8, 2018 12:22 g 0
iyadoo dowladda Puntland ay jirsantay 20-sano ayaa waxaa muuqata in wali ay liitaan adeegyadda ay bulshadu kahelaan goobaha Caafimaadka ee ku yaala gobolada Puntland siiba Isbitaalada dowladdu ay maamusho.
Dadka qaar ayaa adeegyo caafimaad udoonta magaalooyinka Hargaisa, Adis-Ababa iyo Muqdisho,taas oo culays weyn ku ah bulshadda Puntland.
Hadaba Isbitaalka guud ee magaalada Garoowe ayaa maalmihi u dabeeyay waxaa laga soo sheegayay in uu ku yimd gaabis dhanka adegyadi uu bixinjiray isbitaalka ah, iyo cabasho ka timid dhanka shaqaalihii Isbitaalka, si aan arimahaas xog dheeraad ah uga helno waxa ay Daljir ka waraysatay D,r C/samad Axmed Jaamac oo ah Agaasimaha Isbitaalka guud ee magaalada Garoowe.
Isbadal lagu sameyaay Guddoomiyaasha Maxkamadaha Gobalka Banaadir dhegayso
Madaxda Ururka ONLF oo sheegay inay Socdaal ku marayaan Gobalada Dalka